Ogaden News Agency (ONA) – Jabhada Gimbot 7 oo Gubtay Baabuur Uraraa Wayaanaha.
Jabhada Gimbot 7 oo Gubtay Baabuur Uraraa Wayaanaha.
War saxaafadeed kasoo baxay Jabhada Gimbot 7 Arbanyoj ee udagaalanta xoraynta dhulka Axmaarada ayaa lagu sheegay in ciidanka Jabhadu uu weerar kuqaaday baabuur kolonyo ah oo ay wateen ciidamada wayaanuhu.
Sida bayaanka Jabhada Gimbot 7 lagu sheegay ciidamada Jabhada ee kusugan xuduuda Sudan iyo Itoobiya ayaa weerar kuqaaday baabuur booyado ah oo siday shidaal, kuwaas oo uraraa ciidamada gumaysiga Itoobiya.
Sida warsaxaafadeedka ku cad ciidamada Jabhada Gimbot 7 ayaa dab qabadsiiyay dhamaan baabuurtii waday shidaalka ee uraraa wayaanaha, kuwaas oo kasoo kicitimay dakada Bort Sudan ee wadanka Sudan.
Sidoo kale bayaanka Jabhada kasoo baxay ayaa lagu sheegay in aysan Jabhadu ogolaandoonin in ciidanka wayaanaha uu saadku uga yimaado wadanka dariska ah ee Sudan, waxayna Jabhadu sheegtay in dhulkooda ay iyagu gacanta kuhayaan isla markaana ay gubi doonaan baabuurta wayaanaha.
Ma aha markii ugu horaysay ee baabuur uraraa ciidamada wayaanaha lagubay, labo bilood kahor unbay ahayd markii ciidamada Jabhada Gimbot 7 ay dab qabadsiiyeen kolonyo baabuur ah oo sidan oo kale waday shidaal, kuwaas oo kusii jeeday magaalada Addis Ababa.
Wadanka Itoobiya oo sanadihii lasoo dhaafay ay kajirtay shidaal la’aan aad ubadan ayaa umuuqda in lagu hongoobay hamigii laga lahaa in uu shidaalku ka imaandoono wadanka Sudan.